Candy September 24, 2011 at 1:05 PM
အဲ့လို ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ရင် သိပ်ကြိုက်... ဒါနဲ့ လူပုံက တစ်ပုံပဲပါတယ်... နောက်ဆိုများများတင်နော်... အစ်မက ရန်ကုန်မှာနေတာလား... မသိပါဘူး... ပြည်ပကပဲထင်လို့... ရန်ကုန်မှာလည်း blogging နိုင်တယ်ဆိုတော့ connection တော်တော်ကောင်းပုံပဲနော်... :D
တောက်ပကြယ်စင် September 24, 2011 at 2:23 PM
အားမနာဘူး။ ရေးမယ်နော်။ စိတ်မဆိုးကြေးနော်။ ကဲ ရေးပြီဗျာ။ အဟမ်း အဟမ်း။ သမီးစံက အပျိုကြီးဆိုတာ ဟုတ်လား။ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ လျှောက်ပြောတာနေမှာပါ။ ပုံထဲမှာ ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတဲ့ဥစ္စာ။ သမီးစံစာဖတ်ရတာ ဟာသမဟုတ်တာကို ဟာသဖြစ်အောင် ရေးတတ်တယ်နော်။ အမှတ်ပြည့်ပေးတယ်။ ရော့ ၁၀-မှတ် ၁-ပြန်ဖြုတ်။ နောက်တာပါ။ ၁-ပြန်မဖြုတ်ပါဘူး။ ဒီထက် စာကိုလေ ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မတွေ၊ စာပိုဒ်တွေကို ဂရုတစိုက်သေချာရေးထားရင် ဖတ်လို့အရမ်းကောင်းမှာ သိလား။ ပြောသာပြောလိုက်ရတာ စိတ်ဆိုးသွားပြီလား မသိ။ အင့်...မဆိုးလောက်ပါဘူး။ ပြောနေရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားမှန်းလည်း သိတော့ဝူး။ တော်ပီနော်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...
သမီးစံ September 24, 2011 at 3:19 PM
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 24, 2011 at 6:17 PM
ကျောင်းကတော့ ကြည့်ရတာ တော်တော်မဆိုးဘူး ကောင်းတယ်လို့ ပြောရမယ် သစ်ပင်များများစိုက်ပြီး အပင်ကြီးတွေ များလာပြီး အရိပ်ရရင်တော့ အေးချမ်းပြီးပျော်ဖို့ ပိုကောင်းမယ်နော်။ စာမေးပွဲဖြေနိုင်တယ် မဟုတ်လား။ အောင်မြင်ပါစေ ညီမလေးရေ။
မောင်ဘုန်း September 24, 2011 at 6:48 PM
အပျိုကြီးတော့ ကြော်ငြာထည့်ပြီ .... အဟီး ....
သျှင်နေမင်း September 24, 2011 at 7:04 PM
စီနီယာအမကြီက ပဲခူးစုက လာမသိဘူနော်.......
မြင်ဖူးသလိုလိုနဲ့မေးကြည့် ပေးပါ...
အနော်ကို သိရဲ့ လားလို့ ..းP
သမီးစံ September 24, 2011 at 10:12 PM
ပြောပါပြီးသော်ကော ဘုန်းဘုန်းရယ် သမီးစံက စိတ်ဆိုးတတ်ပါဘူးဆို ;P
အစ်ကိုသျှင်နေမင်းရေ..စီနီယာအစ်မက သန်လျင်သူပါပဲ တွေ့ဖူးမှာပေါ့ရှင်
:P အစ်ကို့ကိုသိလောက်ပါတယ်။မေးကြည့်ပေးမယ်နော်း))
ချယ်ရီမြေ September 25, 2011 at 2:02 AM
မင်္ဂလာပါသမီးစံရေ... ကျောင်းတော်ကြီးဆီမှ ပညာရပ်ပေါင်းစုံကို စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြင့် သင်ကြားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ သမီးစံကို နိုင်ငံခြားတစ်နေရာကနေ ၀ပ်ဆိုက်သုံးနေတာလို့ ထင်နေတာ။ မြန်မာပြည်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်က ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ပြီး အင်တာနက်ကနေ အမြင်တွေ ဗဟုသုတတွေကို ရှာဖွေနိုင်တာဆိုတော့ သမီးစံက အရမ်းတော်လို့ပေါ့။ တကယ်ပြောတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားအများစုက အဲလိုမဟုတ်ကြဘူးလေ... သမီးစံပိုသိမှာပါ... တကယ်ချီးကျူးပါတယ် သမီးစံရေ....(အပျိုကြီးလုပ်မှာဆိုပြီး ကြေငြာထားတော့)ဘာဆုပေးရမှာတုန်း။ အနာဂတ်မှာ မိသားစုအတွက်၊ တိုင်းပြည်အတွက် ဘသာသာ သသနာအတွက် ထွန်းတောက်လာမည့် ကြယ်တစ်ပွင်ဖြစ်ပါစေ။ အော် သမီးစံအဖေ ဦးကျော်ဟိန်းကိုလဲ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း....
တို့ ကျောင်း ..အလန်းကလေးများ တွေ့ လိုက်ပီ
အချိူရည်မှာ ဘီယာပေါင်း မောင်တို့ စာသင်ကျောင်း
အဲ..မှားလို့သမီးစံတို့ စာသင်ကျောင်း
မကြောရင် နကို လာခေါ်မဲ့ ဒါဘဲ ကျန်တာ မန်ဒါလီ
ခင်မင်စွာဖြင့် လူပျိူလေး အိုဘစံ..အဲလဲ့
ကဗျာမူရင်း ..(ပန်းကလေးများ ပွင့်တော့မည်
san htun September 25, 2011 at 9:52 AM
ကျောင်းလေးက လှတယ်နော်..သေသေချာချာ ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ပေးထားတာပဲ..
သမီးစံ September 25, 2011 at 10:15 AM
jasmine(တောင်ကြီး) September 25, 2011 at 12:58 PM
တစ်ကျောင်းလုံး “Queen”က Petrol Major မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့
အဲတာသမီးစံရဲ့ major ပဲဖြစ်ရမယ်....
mstint September 25, 2011 at 3:09 PM
ဓာတ်ပုံလေးတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ ဗဟုသုတရတယ် သမီးစံရေ။
အိမ်မက်စေရာ September 25, 2011 at 3:38 PM
အယ် သူများတွေက အစ်မ သမီးစံဆိုလို့ အသက်ကြီးပြီထင်နေတာ ..လွဲ ပဟဲ့.. ငယ်ငယ်လေး ရှိသေးတာကိုး
သမီးစံ တို့ ကျောင်းကိုကြည့်ရင်း အိမ်မက်တို့ ဒဂုံ တက္ကသိုလ်လေးကို လွမ်းမိပါတယ်( ဒီအချိန်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ အလယ်မှာ ချုံပုတ်တွေလဲ လှုပ်နေပြီကွာ..) JK
ဂျက်ရဲ့Petrol Major ကမိန်းကလေးလက်မခံဘူးကွဲ့
အဲဒါကိုအစ်မကနောက်ပြီးရေးထားတာ ဟိဟိး))
တမီးရှံ အတက်ကြီးပြီရှင့် စိတ်ပျိုလို့ကိုယ်နုနေတာပါရှင် ဟိဟိ
ချယ်ရီမြေ September 25, 2011 at 6:31 PM
သမီးစံရေ.. ကြော်ငြာကြောင့်ထင်ပါ့.. ကွန်မင့်တွေစီနေတာပဲ..ဟဲဟဲ..
သမီးစံကို နိုင်ငံခြားတစ်နေရာကနေ ဘလော့သုံးနေတာထင်နေတာ... ပြည်တွင်းကနေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတစ်ယောက်က အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေ ဗဟုသုတတွေကို ရှာမှီးနေတာတွေ့ရတော့ တကယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်..။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားဆိုတာ အဲလိုကိုဖြစ်နေရမှာ။ ပြည်တွင်းမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ/သားအများစုက အဲလိုမဟုတ်ဘူးလေ။ သမီးစံပိုသိမှာပါ။ သမီးစံကို တကယ်ချိုးကျူးပါတယ်..။ အောင်မြင်မှုအလီလီ ဆွတ်ခူးနိုင်ပါစေ... အော်... သမီးစံအဖေ ဦးကျော်ဟိန်းကိုလဲ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း...
သမီးစံ September 25, 2011 at 6:54 PM
မဒမ်ကိုး September 26, 2011 at 8:02 AM
သမန်စီးလေး အပျိူကြီး တကယ်လုပ်မှာလားပြောစမ်းပါး)
သမီးစံ September 26, 2011 at 8:30 AM
su yee September 26, 2011 at 10:16 AM
Hi sister,thanks for school photo,I also finish by Civil in 2005 that school.I miss school:(,New building is beautiful.I inform all of my friends in Singapore ,your blog have school photo.If u arrive in Singapore,u can contact me.suyeephyoe@gmail
သမီးစံ September 26, 2011 at 12:16 PM
ပြီးမှ မောင်းမထုတ်နဲ့နော် ဟီးး
အီးမေးလ်ကိုလည်း invite လုပ်လိုက်ပါပြီရှင်
မစိုး September 27, 2011 at 10:59 AM
ရေးဘူး။ ရေးဘူး။ စိတ်ဆိုးတယ်။ စိတ်ကောက်တယ်။
ရေးဘူးကွာ။ လုံးဝရေးဘူး။ ရေးဘူးဆိုရေးဘူးပဲ။ ဒါပဲ...ဟွန့်။:(
သမီးစံက သန်လျင်ကျောင်းကကိုး. ခုထိကျောင်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ထက် အများကြီးငယ်တာပေါ့.. ဒါပေမယ့် လူမှုရေးအလုပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ထက်တောင် ပိုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် လေးစားပါတယ်ဗျာ..
ကျွန်တော်က ကျောက်ဆည်ကျောင်းက ပြီးတာလေ.. ကြာပါပြီ.. လာမည့် ၃၀ ရက်နေ့ မှာလဲ ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ..
စိုင်းစိုင်း Z@!'s Life
ကေခိုင် June 15, 2012 at 6:52 PM
ချစ်မောင်မောင် August 3, 2012 at 10:05 PM
သမီးစံတို့သန်လျင်ကျောင်းက ကျနော်တို့ ပြည်ကျောင်းထက် ပိုလှတယ်နော်... ကျနော်တို့ ကျောင်းက တော့ထဲမှာဂျ... ( ကိုယ့်မေဂျာကို ကျတော့ ညွန်းတယ်နော် ပြိုင်စံရှားတဲ့ ဘာတဲ့ အိုင်တီ.... ဟုတ်တယ်နော်.... ဟေ့ နာတို့... EC ကို လာမပြိုင်နဲ့နော်... နာတို့လဲ circuit calculation တွေကို အလွတ်ကျက်ပီး ဖြေလာတာနော်.... ဟွန်းးးးးးးးးး ) ဘလော့ဂါ တယောက်အနေနဲ့ အောင်မြင်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ... အားပေးပါတယ်... မမ သမီးစံ.. ဖတ်ခွင့် လေ့လာခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးးးးးးးးးးးးး
ဆန်းစနေ၀န်း August 22, 2012 at 1:42 PM